चिकित्सकमाथिको आक्रमणको बिरोधमा पोखरामा आन्दोलनमा – Pahilo Page
१८ असार २०७७, बिहीबार २३:२७ 579 पटक हेरिएको
पोखरा । झापाको बिर्तामोडमा गत साता डाक्टरमाथि भएको आक्रमणको बिरोधमा पोखराका युवा डाक्टरहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । गएको असार ११ गते झापाको बिर्तामोडस्थित मेडिका हस्पिटलमा कार्यरत मेडिकल अफिसर डाक्टर सुधाकर झामाथि भएको आक्रमणको बिरोधमा पोखराका युवा डाक्टरहरुले बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की अगाडि धर्ना दिएका हुन् ।
युवा चिकित्सक संघ गण्डकीले आयोजना गरेको शान्तिपूर्ण धर्नामा ७५ जना डाक्टरहरुको सहभागिता रहेको संघका सचिब डा. सञ्जीव बस्नेतले जानकारी दिए । कोरोना भाइरसको महामारीका बीच आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर फ्रन्टलाईनमा काम गर्ने डाक्टरमाथिको हमला अमानवीय हर्कत भएको भन्दै आफूहरु आन्दोलनमा उत्रिएको उनीहरुले बताएका छन् ।
यस्तो बेला साथ, सहयोग र हौसला दिनुपर्नेमा उल्टै डाक्टरमाथि आक्रमण हुनु दुःखद भएको भन्दै उनीहरुले सरकारसँग भरपर्दो सुरक्षाको माग समेत गरेका छन् । घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारवाही गर्न पनि चिकित्सकहरुले सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेका छन् । युवा चिकित्सक संघ गण्डकीका सचिव डा. सञ्जीव बस्नेतको संयोजकत्वमा भएको धर्ना कार्यक्रमको सञ्चालन संघका गण्डकी प्रदेश उपाध्यक्ष डा. राम अधिकारीले गरेका थिए ।
गएको असार ११ गते बिहीबार राति ९.३० बजे हुल बाँधेर हस्पिटल पुगेको १०÷१५ जनाको समूहले डाक्टर झामाथि आक्रमण गर्दा उनको नाकमा चोट लागेको थियो । बिर्तामोड – ६ का ८ वर्षे बालक विज्ञान राईको हात भाँचिएपछि उपचारका लागि राति ८ बजे हस्पिटल लगिएको थियो । हस्पिटलका अनुसार बालकको हातको अप्रेसन गरिएको र अवस्था सामान्य थियो । उनीहरूले बिरामी हेर्न एकैपटक जान खोजेपछि नजिकै रहेका डा. झाले सम्झाउन खोज्दा उनीमाथि आक्रमण भएको जनाइएको छ ।